Gịnị cryptocurrency na-investors gwara ere, na nke onye na-? - Blockchain News
Gịnị cryptocurrency na-investors gwara ere, na nke onye na-?
Ọgwụgwụ nke May eju ndị kaadị ụlọ ọrụ na a ọwọrọiso bearish kuu na mgbanwe. Ke akpatre trimester nke May, na TOP-25 cryptocurrency gosiri a kwesiri ngosi ojuju. Ya mere, on May 22, bitcoin dara n'okpuru $ 8000 maka oge mbụ ebe April 18. Eta na Bitcoin Cash nyụọ 14% na a izu, EOS – site 6%, na XRP – site 8.5%. The naanị-eto eto na izu bụ TRON (TRX), nke kọrọ a nta na-abawanye na ya ruturu.
Na-emekarị nke otu n'ime ndị isi ahịa nrịbama – ruru nke cryptocurrency ụzọ Ethereum na Bitcoin – nwekwara gbanwere a n'ala otu. N'ihi nke a, ọzọ Altcoins, dabeere na Ethereum blockchain na, Ya mere, obere dabere na ya ọnọdụ, nwere ike ịda sharply ma ọ bụrụ na ndị bitcoin ọnụego na-aga n'ihu na-ojuju. N'otu oge ahụ, na cumulative cryptocurrencies ahịa capitalization ebelata ka $ 322.5 ijeri, sagging site 14% tụnyere nke abụọ trimester nke May.
Gịnị kwesịrị ahịa na-eme ahịa, nke mesịrị bụrụ bearish paws? na nso nso, ịmalite investors na-ama mara mma ndị ọkà okwu nke cryptocurrencies na-ama na-ike-enye ha ndụmọdụ ahịa ihe ịzụta, ihe na-na ihe na-ere. Ọ bụ ezie na January a na-emekarị n'etiti nnukwu fiat investors ahụ abụghị doro anya.
Cryptocurrency investors nwere ike ikwu
Ọmụmaatụ, Spencer Bogart, a na onye òtù ọlụlụ na Blockchain Capital, na-ekwere na ugbu a ọnọdụ na mgbanwe bara uru maka a ịga nke ọma zuo. “Ebe ọ bụ na bitcoin nso nso a na-eji ihe ndị ọzọ na-na na ọ ka nwere ọtụtụ institutional ọdịmma, ọ bụ uru etinye na ya. All nnukwu mmiri na-agbalị na-arụ ọrụ na ya, na-enye ndị ahịa ha. Ụfọdụ na-emeghe trading nyiwe. A miri institutionalization nke bitcoin bụ n'ozuzu mma, “ọkà okwu kwuru.
N'agbanyeghị nēfedakwasi Ọnọdụ nke ụwa mbụ cryptocurrency, Bogart bụ nnọọ bullish banyere ọdịnihu ya. “Nwere ike Bitcoin na-dị ọnụ ala karịa? n'ezie. Ma ka m na-eche na na a afọ ya N'ezie ga-elu? nnọọ n'aka, “- ọ kọwara na ihe N'ajụjụ ọnụ maka CNBC.
Positive amụma, Otú ọ dị, anaghị emetụta altcoins. “Ọtụtụ cryptocurrencies na-overvalued na-apụghị ịdabere na. E nwere ohere na ha ga- “gbaa”, ma ha nwere ọtụtụ ihe mgbochi a, “Bogart kwuru.
Ọzọ ịmalite ọṅụ tụrụ aro na-ewere a Ilerukwu Cardano (Ada), TRON (TRX), iota (kemgbe) na NEO (NEO).
na-akpali mmasị, dị ka maka Ethereum Spencer Bogart bụ kama kpachara anya. “Ihe bụ, e nwere ihe a ọtụtụ ICO na Ethereum blockchain. Ọ na-amaghị ihe ga-eme ndị a oru na otú nke a ga-emetụta ndị airing Ethereum N'ezie,” o kwuru. “N'akụkụ aka nke ọzọ, M ga-jide dị na pọọsụ nke ndị dị otú ahụ nnukwu Player dị ka Ripple, Bitcoin Cash na EOS.”
Ọzọ kaadị enthusiasts nwekwara egosipụta kama kpachara anya amụma. “Gịnị na-eme na a bearish emekarị, nke, na-ajụ okwu, na-adịghị na-egosi na ihe ọ bụla? Ọ bụ maa bụghị uru ịzụ cryptocurrency na ada iji. Ọ bụrụ na ị na-aga ihe n'ihi na ọnwa isii ma ọ bụ a afọ, mgbe na-adịghị-ihe ọ bụla. Ọ bụrụ na ị na-ama na-anọdụ a ogologo oge Pọtụfoliyo atụmatụ, mgbe jide, n'ihi na a na-adịghị adịte emekarị na ọ bụ edoghị ma ọ ga-ekwe omume-awụlikwa elu na-awụlikwa elu ọzọ na a ka mma price. Na-ere naanị-eme ka uche ma ọ bụrụ na ị na-a ọkachamara ahia. Ma ọbụna na ha nwere ike ahia, n'ezie, na na oru rebounds, ka ihe ọ bụla ikpe na ọ bụ mma na-ha akụ. N'izugbe, m nkwanye bụ na ntị ka altcoins na ala capitalization, n'ihi na ndị ahịa na-now na-edinara ala, na altcoins mgbe bitcoin na-emikpu na ugboro ọzọ.
Gịnị na-eme na ọnọdụ nke a nlaazu na ahịa, onye ọ bụla ozu ahia na-ekpebiri onwe. The ihe kasị mkpa bụ n'ụzọ ziri ezi na-etolite gị cryptocurrency Pọtụfoliyo na efula ma ọ bụrụ na e nwere fluctuations ke ahịa. Karịsịa na ndị dị otú ahụ obodo ka cryptocurrency.
NYC mgbanwe Genesis ...